Chrome OS inozokwanisa kumhanya Windows zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Kungoti sisitimu yekushandisa inotaridzika uye inoshanda nemazvo haingoitisa kuti ive isisitimu yakanaka yekushandisa. Ndokunge, muchidimbu, izvo zvinoitika kuLinux-based mobile operating system: zvisinei nekuti vanoshanda zvakadii, kana vasingakwanise kumhanyisa anokosha mafoni ekushandisa, akadai seStrava kana yakanaka yemitambo app kana WhatsApp, haisi iyo yakanyanya kunaka sarudzo. ruzhinji rwevanhu. Ichi chinhu chinoitikawo kune Chrome Os, Google's desktop operating system, asi izvozvo zvichavandudza munguva pfupi iri kutevera.
Kunge informa Kufanana, iyo virtualization software kambani, uye Google vasvika chibvumirano chekuunza iyo windows maapplication kuenda kuChrome OS. Kufananidza ndeye yakakurumbira chaiyo muchina software ine mukurumbira yakapararira mu macOS, uko yanga iri imwe yeakanakisa kwenguva yakareba, ichipa sarudzo mune yatinogona kuvanza iyo Windows desktop kuti tione chete windows emashandisirwo ayo. Iyo kambani inoona nezve iyi software ndiyo imwe chete iyo ichaita zvakafanana, kana chimwe chinhu chakafanana, kugoneka paChannel OS.
Chrome OS uye Kufanana vanosvika chibvumirano chakakosha
Kunyanya kutaura, chibvumirano chichaita vatengi veC Chrome OS yemakambani kukwanisa kumhanya izere maWindows application kutanga kudonha uku:
Kufanana kunounza anopfuura makore gumi echiitiko mumuchinjika-chikuva mhinduro, zvisina musono kubatanidza mashandiro esisitimu uye maficha, kune kubatana kwayo neGoogle. Kufananidza 'kuhwina-kuhwina software mhinduro kunoita kuti zvive nyore kumakambani, mabhizinesi, masangano uye vanhu kuwana uye kushandisa iwo maapplication uye mafaera avanoda pane chero chishandiso kana inoshanda sisitimu
Ruzivo rwekuti ivo vachakwanisa sei kuita zvese izvi zvichaburitswa mumwedzi inotevera. Hongu zvinozivikanwa ndeyekuti chibvumirano ichi chinobvumira Chrome OS kumhanyisa zvinoshandiswa senge desktop vhezheni ye Microsoft Office, iyo inogona kungova nhau dzakanaka dzevashandisi veChannelbook.
Chrome OS 83 llegó Chivabvu 28 nenhau dzakadai semapoka ematabhu mubrowser, Media Sessions yeMubatsiri uye kugona kuona password kana PIN panguva yekupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS inozokwanisa kumhanyisa Windows zvishandiso, kunyangwe kuburikidza nekuona